10 cách tạo dáng chụp ảnh đẹp khi mặc váy | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: 10 cách tạo dáng chụp ảnh đẹp khi mặc váy | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
CachHayNhat – The Indlela yokubeka ifoto elungileyo ngelixa unxibe ilokhwe Ngalo lonke ixesha ujonge abasetyhini ukuba bafunde indlela yokubeka iifoto ezintle. Eli nqaku licebisa iindlela ezilungileyo, ukuqinisekisa ukuba awuyi kuba neentloni xa unxibe isiketi phambi kwekhamera yekhamera, kwaye ufumane iifoto ezininzi ezintle kunye nezanelisayo.
Indlela yokubeka ifoto elungileyo ngelixa unxibe ilokhwe
1 Indlela yokubeka ifoto elungileyo ngelixa unxibe ilokhwe
1.1 1. Jika
1.2 2. Ukungqiyama
1.3 3. Hamba, baleka
1.4 4. Bamba, uphakamise, uphose kancinci i-skirt
1.5 5. Selfie phambi kwesipili
1.6 6. Jonga esibhakabhakeni
1.7 7. Hlala ngemilenze yoluliwe okanye iwele
1.8 8. Jika umva okanye ujonge ngasemva
1.9 9. Wanga amadolo akho okanye ubeke izandla zakho emadolweni akho
1.10 10. Ukulungelelanisa kunye nezixhobo zefashoni
1.11 Bona izithuba ezininzi
Iilokhwe ziyinxalenye eyimfuneko kwiwodrophu yamantombazana kunye neesutikheyisi zokuhamba. Kodwa ukuba ufuna ukwazi indlela yokubeka ifoto elungileyo ngelixa unxibe ilokhwe, kufuneka ukhumbule la macebiso alandelayo.
Ukuba indlela yokubeka ifoto entle ngelixa unxibe ilokhwe enencasa kwaye intle ayizange ikwenze waneliseke kwaye unemvakalelo yenkululeko kunye nenkululeko, sebenzisa kwangoko obu buchwephesha bungezantsi. Olu hlobo luyingcebiso yeelokhwe ezivuthayo, iilokhwe ezininzi, iilokhwe ezinde, ngakumbi iilokhwe zenkosazana kunye nenkosazana ezinoyilo oluntsonkothileyo. Indlela yokuguqula nayo ihluke ngokukodwa, ukusuka kwi-90 degrees, i-180 degrees ukuya kwi-360 degrees. Ke ngoko, unokuzikhethela ngokusekwe kwisitayile sengubo kunye nesiphumo esifunwayo sokufumana.
Kula mantombazana angaziyo ukwenza iifoto ezintle xa enxibe iziketi okanye ethanda ukulula, le ntshukumo ingqingqwa iya kuba lolona khetho lufanelekileyo. Kulula ukuzifunda, kulula ukudibanisa nayo nayiphi na ilokhwe, isitayile, iseti okanye isiqingatha kunye nokufota umzimba opheleleyo. Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukunxiba ilokhwe entle, khetha i-engile yobuso bakho ukuze uzive uzithembile, emva koko wongeze izandla ezimbalwa, uhlale okanye ume ngendlela othanda ngayo, uthambekise umzimba wakho kancinci, kwaye ngoko nangoko uya kuba nomfanekiso “othandekayo”. .
3. Hamba, baleka
Ukunxiba ilokhwe entle kwaye ilungele umzimba, ukudibanisa ngakumbi kunye nezixhobo, ukuhamba-ubaleka ngokwemvelo kwaye emva koko “ukhazimla” omnye, unomfanekiso omhle kwangoko. Le ndlela yokubeka iifoto ayiyona nje ilula kakhulu, inokusetyenziswa kulo naluphi na uhlobo lwesinxibo, kodwa idala imvakalelo yokusondelana, ukucaca kunye nefashoni. Intshukumo ikwanceda iimpahla ukuba zijonge ngakumbi kwaye ziphawuleke ngakumbi, ke ukuba ufuna ukubonisa isitayile sakho sokunxiba njengefashionista okanye iifoto zakho ezithatha amaxesha abizayo, khumbula ukufaka isicelo.
4. Bamba, uphakamise, uphose kancinci i-skirt
Le ndlela yokubeka iifoto ezintle xa unxibe le mpahla yindlela efanelekileyo yeengubo ezinamaza ajikelezayo, ngakumbi iilokhwe ezinde, iilokhwe zeentyatyambo okanye iingubo ezikhanyayo. Ukongeza ekongezeni ukushukuma emfanekisweni, intshukumo yokusebenzisa izandla ukubamba, ukuphakamisa okanye ukuphosa kancinci isiketi kukwanceda abasetyhini ukuba bafumane amanqaku athambileyo, athambileyo kunye namahle kakhulu ngempumelelo. Ukongeza, indawo engasentla ifanelekile kakhulu kumbono wokufota ngaphandle okanye ukuthatha iifoto xa uhamba, ke kufuneka ukhumbule ukuyigcina ukuze ungabi neentloni xa umi phambi kwekhamera.
5. Selfie phambi kwesipili
I-Selfie phambi kwesibuko yindlela yokubeka ifoto entle ngelixa unxibe ilokhwe, ehlala isetyenziswa ngabafaki-fashionistas okanye amantombazana abathanda ukufota. Ukongeza kokufanelekileyo kuzo zombini iindawo ezincinci, imiboniso yokufota yangaphakathi nangaphandle, le pozi ikwanceda ukuba ubonise isinxibo sakho kunye nenzuzo yomzimba wakho. Ngokukodwa, ukuthatha i-selfie phambi kwesibuko sesinye sezona ngcebiso zifihlakeleyo zokufota, ke ukuba uyoyika ukubonisa ubuso bakho okanye unganxibi izimonyo, ngokuqinisekileyo awufuni ukuyihoya.
6. Jonga esibhakabhakeni
Le ndlela yokubeka iifoto ezintle xa unxibe ilokhwe ayifuni ukutyhila ubuso, ifaneleke kakhulu kwiifoto zangaphandle, ngakumbi iindawo ezinemvelaphi entle. Ke ngoko, ukuba ufuna ukuba nomfanekiso wendalo kunye nombongo xa unxibe isiketi kwaye uthatha indawo engqongileyo, khumbula ukusebenzisa eli qhinga liqhelekileyo.
7. Hlala ngemilenze yoluliwe okanye iwele
Ukuhlala ngemilenze eyoluliweyo okanye enqamlezileyo yindlela yokubeka ifoto entle ngelixa unxibe ilokhwe enokuthi isetyenziswe ngabasetyhini naphi na, kuyo nayiphi na ingcamango okanye indlela yokugqoka. Zifaneleke ngakumbi iimeko ezifana neendawo zokutyela, iikhefi okanye iindawo zikawonke-wonke. Ukongeza, indawo yokumisa engentla ifanelekile kuzo zombini ezi zinto zithambileyo, zimnandi, zimnandi kwaye zintle, izitayile ezinobunewunewu kunye nezihendayo, ngoko awuyi kuba nexhala kakhulu.
8. Jika umva okanye ujonge ngasemva
Ukuba ufuna ukuthatha imifanekiso kodwa uyoyika i-lens okanye uthanda ukubeka nzulu kakhulu kwaye ngokungaqondakaliyo, kufuneka ujike umva okanye ujonge ngasemva. Uqinisekisiwe ukuba nothotho lweefoto ezintle kunye nendalo kwaye zigcwele ubugcisa. Ingcebiso encinci omele uyikhumbule kukuba i-backless, iziketi ezinde zifanelekile kakhulu kule pose. Ukongeza, i-hairstyle nayo idlala indima ebaluleke kakhulu, ngoko ke nceda uyinakekele, ufunde indlela yokudibanisa, ukugoba, ukubopha isiqingatha sokuqala kunye nokusebenzisa ezinye izixhobo ezifana nezaphetha, iintambo zentloko … ukunyusa umgangatho wobuhle. .
9. Wanga amadolo akho okanye ubeke izandla zakho emadolweni akho
Iziketi ezivuthayo, iziketi ezide zihlala zilukhetho lokuqala lwabasetyhini xa benenjongo yokuphila ngokubonakalayo okanye ukuhamba. Ke, kungakhathaliseki ukuba yintoni na, kufuneka ugcine indlela yokubeka iifoto ezintle, zendalo, kunye nezothando ezicetyiswa ngezantsi.
10. Ukulungelelanisa kunye nezixhobo zefashoni
Ukuba uhlala uxhalabile malunga nokuthatha iifoto kunye nezandla zakho zijinga ngokukhululekileyo, ukujonga okungaqhelekanga, okanye ukuma kwezandla ezinjengokwayama esinqeni sakho, ukubeka izandla zakho ku-V, ukubeka izandla zakho ezidleleni zakho, njl. njl., sele uqhelekile kwaye iyadika. , emva koko ungenza into entsha ngokudibanisa izixhobo ezifanelekileyo.
Ukuthetha malunga nezixhobo, yahluke kakhulu, unokulungelelanisa ngokupheleleyo iminqwazi, iiambrela, iibhegi, iiglasi, njl njl. Ngokuxhomekeke kwisitayile, unokukhetha izixhobo ezifanelekileyo. .
Xa ukhetha izixhobo zokufota, kuya kufuneka ucinge ngokukhetha inani eliphakathi ukuze ugweme ukudideka xa udibanisa izixhobo ezininzi emzimbeni wakho. Ngaphandle koko, umbala wezixhobo nazo kufuneka ziqwalaselwe ngononophelo. Awukwazi ukuxuba njengoko uthanda, kuba ukungafani kombala kuya kwenza umgangatho womfanekiso wehle, kufuneka ubeke ingqalelo ukuxuba ukuze umbala we-accessory kunye nempahla ibe yinto ehambelanayo. Kwaye khumbula ukuba usanikela ingqalelo kwizinto zokukhanyisa, imvelaphi kunye nombala wempahla.
Ngamanye amaxesha i-accessory yingxowa yokwenza ubalasele kakhulu
Iindlela zokubeka iifoto ezintle ngelixa unxibe ilokhwe ekwabelwana ngayo noCachHayNhat, awusayi kuba nexhala malunga nokuba neentloni xa umi phambi kwelensi yekhamera, kodwa ube nothotho lweefoto ezintle, uzifake ngokukhululekileyo kwiinethiwekhi zentlalo. Ke, ulindele ntoni ngaphandle kokuzama ezi ndlela zingasentla.
Bona izithuba ezininzi
I-20 yeNtengiso yeNeon entle kunye nemibono yokufota ngefashoni
UMfazi omhle kaKirsty Mitchell ocingayo kunye nemibono yokufota ngeFoto
Iifoto zekati ezipholileyo ezingama-31-Imifanekiso emihle yekati eneeglasi
Iingcebiso ezili-15 zokufota ikati-Uzithatha njani iifoto zekati ezintle?
Iikati ezingama-29 ezintle ehlabathini
IMifanekiso yeKati engama-40 Entle-I-Avatar yekati entle
Zappa – imodeli ye-Instagram yekati ephefumlelwe nguGigi Hadid
Iifoto ezingama-31 zeekati ezintle- Iikati ezinxibe iimpahla ezintle
800 imifanekiso yekati emnandi, epholileyo, elusizi, kunye nemifanekiso yekati ehlekisayo
Cách Làm Gốc Cây Mai To Ra Có Thể Bạn Chưa Biết | Hatgiongtihon.net